Ọgba aghara rutere na Malta!
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Malta » Ọgba aghara rutere na Malta!
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Iwughachi • Safety • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ dị iche iche
Ọgba aghara rutere na Malta
Malta, otu agwaetiti dị na Mediterenian, bụ obodo izizi na European Union bidoro ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ndị gafere afọ iri na isii.
Pasent 70 nke ndị toro eto na-eji ọgwụ mgbochi COVID-19 eme ihe ugbu a ọgwụ mgbochi.
Na mgbakwunye, pasent 42 nke ndị bi na ya ugbua na ọgwụ mgbochi zuru oke ebe ha natala ọgwụ mgbochi abụọ.
Akụkọ kwa ụbọchị na-egosi nbelata na-agbanwe agbanwe n'ihe gbasara COVID-19 na ọnụ ọgụgụ nke ọnwụ kwa ụbọchị na-abịakwa ịkwụsị maka ụbọchị 17 ikpeazụ.
N'ihe dị ka izu abụọ gara aga, taa, ihe dị ukwuu karịa ka ebuputara na mbụ, Malta erutela ọgụ nke ìgwè ehi, yana 70% nke ndị okenye toro eto ugbu a yana opekata mpe otu ọgwụ mgbochi COVID-19, yana 42% nke ndị bi ugbu a. ogwu.
Usoro mmemme nke ọgwụ nke Malta emeela ka mbelata nke ọhụrụ nke COVID-19 edere kwa ụbọchị, yana ọnụọgụ ọnwụ kwa ụbọchị na-abịakwa ịkwụsị maka ụbọchị 17 ikpeazụ, ma na-ekwupụtakwa mbelata kwa ụbọchị na Ọrụ COVID-19 Cases.
“Malta inweta oke igwe ya site na COVID-19 bu ihe di oke mkpa maka onodu aku na uba obodo karie ndi oru njem. Atụmatụ gọọmentị nke Maltese nke iwepụta ọgwụ mgbochi siri ike toro na usoro mgbochi na-egbochi iji nwayọ nwayọ nwayọ bụ ihe ndị bụ isi na-akwado ozi ọma a. Minista maka njem nleta na nchedo ndị ahịa, Clayton Bartolo kwuru na obodo anyị ga-anọ na nche maka ọgụ ọ na-alụso nje a.
“Nkwuputa nke taa na-enye anyị ezigbo mkpali nke anyị niile chọrọ, ebe anyị na-anabataghachi ndị njem nlegharị anya na Maltese Islands dị ka ụbọchị mbụ nke June. Ọganihu a ga-abụrịrị ihe mkpali ọzọ maka ndị na-eme ezumike na-achọ ezumike na nke kachasị mkpa, ezumike dị mma, "Onye isi njikwa Malta Tourism Authority, Johann Buttigieg kwukwara.
Agwaetiti ndị anwụ na-acha na Malta, n'etiti Oké Osimiri Mediterenian, bụ ebe obibi maka ịchebe kachasị dị egwu nke ihe nketa na-emebibeghị, gụnyere nke kachasị elu nke UNESCO World Heritage Sites na mba ọ bụla-steeti ebe ọ bụla. Valletta nke ndị Knights St St. ahụ dị mpako wuru bụ otu n'ime nlegharị anya UNESCO na European Capital nke Omenala maka afọ 2018. Ebumnobi nke Malta na okwute sitere na ụlọ okwute kachasị ochie na-akwụghị ụgwọ ọ bụla n'ụwa, rue otu n'ime Alaeze Britain kachasị egwu. usoro nchebe, ma gunyere ngwakọta nke ụlọ, okpukpe na owuwu ndị agha site n'oge ochie, ochie na oge oge a. Site na ihu igwe na-achasi ike, osimiri mara mma, ndụ abalị na-eme nke ọma, na afọ 7,000 nke akụkọ na-akpali mmasị, enwere nnukwu ọrụ ịhụ na ime. Maka ozi ndị ọzọ na Malta, gaa na www.visitmalta.com.